BIME: Sọftụwia dịka Ọgụgụ Azụmaahịa Ọrụ | Martech Zone
BIME: Sọftụwia dịka Ọgụgụ Azụmaahịa Ọrụ
Tọzdee, Febụwarị 7, 2013 Wednesday, February 6, 2013 Douglas Karr
Dika onu ogugu nke data data na-eto, ọgụgụ isi azụmahịa (BI) sistemụ na ịrị elu (ọzọ). Usoro ọgụgụ isi azụmaahịa na-enye gị ohere ịzụlite mkpesa na dashboard na data n'ofe ebe ị jikọrọ. BIME bụ sọftụwia dịka Ọrụ (SaaS) Ọgụgụ azụmaahịa azụmaahịa nke na - enye gị ohere ijikọ na ntanetị na ntanetị na otu ebe. Mepụta njikọ na isi data data gị niile, mepụta ma mepụta ajụjụ ma lelee dashboard gị ngwa ngwa - niile n'ime interface BIME mara mma.
BIME nwere ike rụọ ọrụ dịka "onye na - agụ ndụ", na-arụ ọrụ nke ọma na ezigbo oge. Agbanyeghị, ọ chọghị ka ịnabata data gị na igwe ojii. Ka o sina dị, nhọrọ a nwere ọtụtụ uru: nweta data gị n'oge ọ bụla na ebe ọ bụla. Dabere na nha data ahụ, ịnwere ike bulite data gị na enweghị nsogbu na Déjà Vu, BimeDB ma ọ bụ Gugulu BigQuery.
Na BIME ị nwere nke doro anya ụdị ajụjụ gafee data gị niile. Debe “ihe” ịchọrọ inyocha na ahịrị na otu ahịrị ma emechaala. Wee kpochaa ma ọ bụ kụchaa ha. Otu ihe na-agbanwe agbanwe, nyocha ha dabere na iwu dị mgbagwoju anya ma ọ bụ tụọ mmetụta nke mgbanwe na ọnụọgụ gị ndị ọzọ.
Na BIME ị nwere ike ịmepụta visualizations mmekọrịta nke ahụ ga-egosi ọnọdụ na usoro dị na data gị. Nwere ike ịkpụzi ha site na nzacha usoro ma ọ bụ ikpughe data ndị na-akpata. A haziri ihe niile iji gosipụta ọtụtụ ozi na obere ohere. Nwere ike iri uru nke agba na nha koodu ngbanwe dịka ọmụmaatụ, ma ọ bụ jiri ọtụtụ nhọrọ nhazi eserese gwuo egwu.
Tụlee nke gị web nchịkọta data na ulo oru gi, tụọ ROI mkpọsa gị maka usoro mmefu ego gị. Nile na otu dashboard. N'iji njirimara na usoro BIME gbakọọ, mgbanwe dị iche iche nke ụwa, otu, ntọala na ndị otu agụrụ nwere ike ile data gị n'akụkụ ọ bụla.
Mepee ike nke ọdụ data jikọtara na Ajụjụ. Ndị ọrụ nwere ike ịjụ ọtụtụ isi mmalite ma nwee nghọta banyere ha - n'agbanyeghị asụsụ a na-ajụ ajụjụ, faịlụ, na usoro metadata. QueryBlender na - enye ndị ọrụ ohere ijikọ ma dakọtara n’ihe ọmụma ọ bụla, site na mpempe akwụkwọ na - enweghị atụ na nnukwu ọdụ data maka ibi data sitere na Google Analytics, Google Apps, salesforce.com ma ọ bụ Amazon Web Services.
Otu ihe na-agbanwe agbanwe, nyocha ha dabere na iwu dị mgbagwoju anya ma ọ bụ tụọ mmetụta nke mgbanwe na ọnụọgụ gị ndị ọzọ. BIME si ngụkọta oge engine nwere ihe niile ị chọrọ, na ọbụna karịa. Atụla egwu ide koodu; anyị nwere ọmarịcha njirimara onye ọrụ maka iwepụta ọtụtụ mgbakọ. Nhọrọ nhazi ga-azọpụta gị ọtụtụ awa ma nye gị ohere ị nweta ngụkọta oge na-edeghị otu usoro.
Kwa BIME ikike na-amalite site na dashboard 20, njikọ data 10, onye mmebe 1 na ndị na-ekiri ihe na-enweghị njedebe.
Tags: Amazon Web ServicesBigQueryBIMDBọgụgụ isi azụmahịaDeja vuGoogle Analyticsngwa ngwa googleGugulu BigQuerysalesforce.com
Akụkọ 2012 B2B Marketing Benchmark